Guurtida Oo Shaacisay Inaanay Go’aankoodii Muddo Kordhineed Wada Hadal Kala Galayn Xisbiyada iyo Xukumadda |
Guurtida Oo Shaacisay Inaanay Go’aankoodii Muddo Kordhineed Wada Hadal Kala Galayn Xisbiyada iyo Xukumadda
Hargeysa(GNN)Golaha guurtida Somaliland, ayaa ku dhawaaqay inaanay go’aankii guurtida kala xaajoon doonin mucaaradka iyo xukumadda toona. Waxay ku sii adkaysteen go’aankii muddo kordhinta guurtida ee ahaa in dalka doorasho ka dhacdo March, 2017.
Afhayeenka golaha guurtida Somaliland Xildhibaan Cabdiqaadir Indho Indho ayaa sheegay inaanay aqbalayn wax wada hadal ah oo ay la galayaan xukuumada iyo xisbiyada mucaaridka isla markaan ka noqosho lahayn go’aankii muddo kordhinta ee ay dhawaan golaha guurtida Somaliland soo saareen.
“Wax wada hadal ah oo aanu arrinkaas xukumadda iyo xisbiyada midna kala galaynaa ma jiro. Waa go’aan sharciyadeed, haddii madaxweynuhu dood ka qabana ha geeyo Maxakamadda sare, waxaanu ka bixin doonaa fasiraade. Golaha wakiilladuna hadday dood ka qabaan ha fadhiisteen oo go’aan ha soo saareen oo maxakamadda ha geeyeen laakiin, dad shicib ah go’aankayaga khilaaf ku sheegi maayaan tanaasulna kala gali mayno. Anagu xisbiyo umaanu kordhin, madalna umaanu kordhin dad shicib ah oo suuqa joogana umaanu kordhin, Madaxweynaha iyo Wakiilladuna xaq bay u leeyihiin inay ka dacwoodaan go’aankayaga” ayuu yidhi Indho-indho.
Hadalka Guurtida ayaa imanaya xilli xukumaddu guurtida u fidisay gogol ku saabsan in lagala xaajoodo go’aanka guurtida si loo waafajiyo wakhti asxaabtu ku heshiisay,
Xisbiyada WADDANI,KULMIYE iyo UCID oo ay weheliso xukuumadda ayaa ayaa May, 27, 2015 waxay wada saxeexdeen heshiis dhigaya in doorashada laga qabto dalka badhtamaha December 2016, iyagoo go’aansaday in laga noqdo wakhtiga guurtidu kordhisay.
Golaha guurtida ayaa horraantii bishii May Muddo xileedka u kordhiyay Madaxweyne Siilaanyo, kuxigeenkiisa iyo wakiillada. Mudaneyaasha guurtida ayaa mudada xukumadda iyo wakiillada oo ku eekayd June, 26, 2015, waxay ku kodhiyeen muddo dhan 22 bilood, waxaanay diideen inay aqbalaan go’aanka asxaabta iyo xukumadda.